Akwụkwọ egwuregwu na-agụnye akwụkwọ afụ iji kwado ịgụ ihe ọchị | Androidsis
Google nwere ụfọdụ teknụzụ na-adọrọ adọrọ. Gbalịakwa jiri ha maka abamuru gị na nke ndị ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anwansi dị ka ọ na-eme na teknụzụ njirimara ihe oyiyi ahụ anyị na-ahụ n'ụzọ zuru oke na ngwa ngwa ngosi ọfụma, Foto Google. Foto nwere ike ịmata ihe ndị dị na foto ahụ iji kọwaa ha na-enweghị enyemaka nke onye ọrụ yana hazie ha nke ọma nke na ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ime ihe ọ bụla.
A na-ejikwa teknụzụ a eme ihe n'ụzọ doro anya na arụmọrụ ọhụụ akpọrọ Bubble Zoom nke etinyegoro na Akwụkwọ Play. Afụ Mbugharị mata okwu egosipụta na ihe egwuregwu na Akwụkwọ Play iji mee ka nha buru ibu ma si otú a kwado ọgụgụ nke ụdị ọdịnaya ahụ nke a na-anakwerewanye n'ihi nnweta ya dị mfe. Site na ịba ụba nke okwu egosipụta na ihe ndị na-atọ ọchị, atụmatụ a na-enye echiche nke ime ihe na ibe.
Site n'iji teknụzụ nyocha ihe oyiyi na usoro mmụta, Google bụ nwee ike ịchọpụta okwu ndị ahụ na peeji nke ma bulie ha nha. Nke a na - eme ka ọ dịkwuo mfe ịgụ ihe ndị na-atọ ọchị mgbe anyị nọ na ama ma ọ bụ obere mbadamba, ebe ọ ga-ahapụ peeji ahụ dịka ọ dị na vignettes ndị ahụ nwere ike ịhụ n'ụzọ zuru oke.
N'oge ahụ, ndị na-atọ ọchị nke na-akwado afụ mbugharị bụ Nchịkọta nke Marvel na DC Comics bipụtara. Nwere ike ịnweta ndepụta site ebe a ma nwalee nnwale ndị ahụ n'efu iji hụ otu ntụpọ ọrụ a si arụ ọrụ. Chetakwa na ị gharịrị ụdị nke Play Books kachasị ọhụrụ anyị nyere n'okpuru.
Ebumnuche Google bụ ịgbasa ọrụ a na ndị ọzọ na-atọ ọchị dị na ụlọ ahịa akwụkwọ ya. Ndị a na-atọ ọchị a ga-egosiputa na ihuenyo nnabata iji kọwaa otú o si arụ ọrụ, ebe ọ bụ na site na ịpị n'akụkụ aka nri nke ihuenyo ma ọ bụ jiri igodo olu, ị ga-enwe ike ịbawanye ogo nke egosipụta ọ bụla dị na ibe.
una mbata na-atọ ụtọ na Play Books nke anyị amaghị ihe na-atọ ụtọ ọnwa ole na ole ugbu a.
Budata ngwa nke Play Books
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Akwụkwọ afụ na Play Books na-ebuwanye oke okwu okwu n’egwuregwu
Periscope na-enweta trailers dị mkpụmkpụ, ikike ilele mgbasa ozi Periscope na tweets na ndị ọzọ